IChina China Ingcindezi Ejwayelekile Yomshini Wokukhiqiza Umshini WaseMishini NeZimboni | I-Ding Tai
I-BOX TYPE CABINET COMMON PRESSURE IMITHI EQHAWULAYO ​​YOKUFAKA ISITOLO
Abakhiqizi bomshini I-Ding Tai Hot yokuThengisa Imvelo Encane i-Sandbaphakade iKhabhinethi Ukugcwala Ukugqwala Ukugqwala Irust Ngencazelo ye-Pedal:
I-1.Abrasive sandbingly inqubo yokuhambisa isihlabathi ngesivinini esikhulu entweni ukuze isuse ukugqwala, upende, noma okunye ukumboza.
Izinhlobo zezinto ezimbili zokuqhumisa ezinolaka zikhona, ezinjengebuhlalu noma i-sodium bicarbonate, kepha i-sandbever exubile yinqubo ethile yokusebenzisa isihlabathi ukukhipha izinto zokwakha.
Umshini okhethekile uyadingeka ukwenza le nqubo, futhi umsebenzisi womshini ngokuvamile udinga ukuqeqeshwa ukuze asebenzise imishini ngokuphepha nangendlela efanele.
I-4.Umsebenzisi uzodinga nokugqoka imishini efanelekile yokuphepha, njengamagilavu, izimbotshana, nesigaxa somkhala nesomlomo, ngoba isihlabathi singaba yingozi empilweni yomuntu.
5.Inqubo yokwenza isantibras ebabazekayo iqala ngokulungiselela indawo lapho ukuqhuma kungenzeka khona.
I-6.Sand izodonswa emshinini, okusho ukuthi kuzodingeka ukuthi umsebenzisi avikele indawo ezungezile.
7. Kwezinye izimo, inqubo ebandayo yesihlabathi engapheli ingenziwa endaweni equkethwe enomoya owenele, ngaleyo ndlela iqukethe lonke isihlabathi nemfucumfucu.
8.Kwezinye izimo, kungadingeka ukuthi ubeke phansi ithawula noma ishidi lepulasitiki ukuqoqa isihlabathi esisetshenzisiwe futhi uvikele enye indawo endaweni eseduze.
Abakhiqizi bomshini I-Ding Tai Hot yokuThengisa Imvelo Encane i-Sandbaphakade iKhabhinethi Ukugcwala Ukugqwala Ukugqwala Ukugqwala Ngezicelo Ze-Pedal:
Umshini wokuqhuma we-1.Shi kufanelekile konke ukwelashwa kwensimbi, ipulasitiki kanye nengilazi.
Isikhumba se-oxide esikhipha isikhumba, izinsalela zemifino nokusaka zingasetshenziselwa ukukhanya komhlobiso, i-matte nokuqinisa ukuphatha.
3.Clean the mold, polishing and atomization zokwelapha of ironwork isikhunta, ingilazi organic nezinye izihloko.Kunezimpawu tzstle yensimbi tungsten yayo yenkonzo ende.
Ukuhlanza I-Blast Kubandakanya:
1.Kukhona uhlelo lokuhlukaniswa kwesishingishane nohlelo lokususa uthuli, isisihlukanisi siyohlukanisa okuqobayo kwensimbi.
Isistimu yokususa i-2.Dust ingabhekana futhi futhi iqoqe uthuli olungasebenzi, futhi idlidliza ihlanza uthuli ngokuzenzakalelayo. Ukugcwala kususa umphumela wokuhle, kunciphise izindleko zokuxineka nokwenza ngcono ukusebenza kahle, futhi akukho ukungcoliswa kwemvelo.
I-3.Suction sand blasting cabinet ilungele ukwelashwa komhlaba yonke imikhiqizo yensimbi, ipulasitiki nengilazi. Susa isikhumba se-oxide.
Abakhiqizi bemishini I-Ding Tai Hot yokuThengisa Imvelo Encane i-Sandbaphakade iKhabhinethi Ngokugcwala Ukugcwala Ukugcwala Ukugqwala Ngeedatha Yobuchwepheshe bePedal:
Cindezela - Kuhlobo lwe-Sand Sand Blasting Machine Technology Technology
i-Hardware, i-elekthronikhi, isikhunta nokuhlanzwa okuncane kwendawo yokusebenza.
Okwehlisayo, okwethusayo, okwehlela phansi, okuhlanza upende ongaphezulu, okwamanje kabanzi
isetshenziselwa ukufafaza, inqubo ye-electroplate pretreatment ukuqinisa ukuhlanganiswa
(ukugoqa) indawo Yesigcilikisha.
Uhlobo Lokucindezela Okuphezulu
I-electromagnetic ishayela umqoqi wasolwandle (uhlobo lwe-cartridge lokuhlunga)
I-50W-LED Explosion-proof Light
I-Pressure Regulation Valve
Hlunga + Okuzenzakalelayo Okuzenzakalelayo
I-Tube / I-Valve
304 insimbi engagqwali
I-White Ripple + Lemon Yellow (Upende wezimoto)
Imanuwali (ukuqhuma ngokuqhubekayo kwe-Siphon)
Ukudutshulwa okusansimbi okuncane, ukudutshulwa kwengilazi / isihlabathi, ukudutshulwa / i-ceramic / isihlabathi, i-brown corundum, i-corundum emhlophe njll.
I-Ding Tai Emunye Umshini Wochungechunge:
Mayelana Inkampani ye-Ding Tai:
I-Ding Tai Machchan Co, Ltd ucwaningo nentuthuko, ukuklama, ukukhiqiza, ukuthengisa, ukufaka, ukuhweba nokuhweba ebhizinisini elilodwa elihlukahlukene.
Sinomshini wokugoba we-CNC, umshini wokusika i-CNC, umshini wokusika, umshini wokudonsa, umshini wokugaya, ukudubula ubhula / wadubula imishini yokuhlola ukuqhumisa, ukudubula ukuqhuma / ukudubula ilabhoratri, imishini yokucubungula ethuthukisiwe nezinsimbi zokulinganisa.
Umshini wokuqhumisa ongu-1.Shot / Okokuqhumisa i-Shot:
(1) .Spinner hanger wadubula umshini wokuqhumisa / umshini wokudubula ukuqhuma
(2) .Umshini wokuhambisa umshini wokuqhuma udubule umshini wokuqhuma
(3) .Umshini wokuqhuma
(4) .I-mesh belst shot umshini wokuqhuma
(5). Ukumiswa kwesikhashana kudlula ngomshini wokuqhuma kwezibhamu
(6) .Qinisa umshini wokuqhuma
Umshini wokuphamba we-2.Shot
Igumbi lokuqhuma kanye nezingxenye njll.
Imishini yokuqongelela udoti
6.Steel shot media njll.
Indawo yokuhlanza indawo: ukubeka, ukwakha, ukwelashwa okushisa, ngaphambi kokuhlanza imishini yezimboni.
2. Indawo ephezulu iyaqinisa / qinisa indawo: Ukuthumela, ukuhamba ngendiza kanye nokuhamba ngendiza, ezokuthutha ngesitimela, imboni yamabhuloho, imboni yasentwasahlobo, isizukulwane esisebenza ngamandla kagesi, ukuzala kwamandla komoya, ukuqhutshwa kwe-oyili ngokushayela izimoto.
3.Industrial enikezela indawo njll.
Q: Ingabe uyinkampani yokuhweba noma umenzi wayo?
Umshini we-sandbever umshini we-5-15 izinsuku zomsebenzi.
Umshini wokuqhuma kwe-Shot yizinsuku zomsebenzi we-15-90.
Umshini wokuphamba waseShot yizinsuku zomsebenzi ezingama-60-120.
kungokobungako nemodeli yomshini.
Q: Ingabe uvivinya isampula mahhala?
A: Uma isivivinyo sokuhlanza sidubula, Yebo, sivivinya isampula mahhala.kodwa uzonikeza izimpahla.
Kepha ukuhlolwa kokuqina kokudubula, uzonikela ngesivivinyo samahhala.
Q: Yimiphi imigomo yakho yokukhokha?
A: Ukukhokha <= 10000USD, 100% ngaphambi kwesikhathi. Ukukhokha> = 10000USD, 40% T / T ngaphambi kwesikhathi, ibhalansi
Q: Uyini umshini wokuqhuma?
A: Ukuqhuma kwe-Shot kuyindlela esetshenziselwa ukuhlanza, ukuqinisa (ukuthambisa) noma i-polini yensimbi. Kusetshenziswa ukuqhuma kwe-Shot
cishe kuyo yonke imboni esebenzisa insimbi, kufaka phakathi i-aerospace, izimoto, ukwakhiwa, isisekelo,
ujantshi wokwakha umkhumbi, nabanye abaningi. Kunobuchwepheshe obubili obusetshenzisiwe: ukuqhuma kwesondo noma ukuqhuma komoya.
Q: Uyini umsebenzi wakho ngemuva kokuthengisa?
A: * Unjiniyela uya kufektha lekhasimende lemboni.
* Ukuqeqesha ukuthi uwufaka kanjani umshini.
* Ukuqeqesha ukuthi uwusebenzisa kanjani umshini.
* Onjiniyela abatholakala kwimishini yokusebenza phesheya kwezilwandle.
Q: Uyini umsebenzi wakho wangaphambi kokuthengisa?
A: * Uphenyo kanye nokwesekwa kokubonisana.
* Ukuxhaswa kwesampula yokuhlola.
* Isixazululo sezobuchwepheshe kanye nesilinganiso
* Sivakashela imboni yamakhasimende kanye nezingxoxo
* Amakhasimende avakashele i-Factory yethu futhi ahlole umkhiqizo wethu.
Q: Isikhathi esingakanani impendulo yakho emva kokuthengiswa?
A: Ngamahora angama-0- 24.
Q: Ngabe ukugeleza komshini wakho kuhamba kanjani?
A: Izinto ezisetshenziswayo ezisikiwe ekusikeni kwe-wire kuya ku-CNC processing kuya ku-welding kupende ukuze zihlangane ukuzama ukugijima
ukupakisha ukuthunyelwa njll.
Uma ufuna ukwazi imininingwane eyengeziwe yabakhiqizi beMshini i-Ding Tai Hot yokuThengisa Imvelo encane i-Sandbaphakade iKhabhinethi Ngokugcotshwa Okugcwele Ukuhlanza I-Rust Nge-Pedal, Siyakwamukela ukusibuza:
Yancheng Ding Tai Machchan Co, Ltd
U-No.9 Huanghai West Road, esifundeni i-Dafeng,
Isifundazwe saseJiangsu, eChina
Ucingo: + 86-515-83514688
Ifeksi: + 86-515-83519466
Iseli: + 86-15151082149
Esedlule: H Umshini Wokubumba Insimbi Wokuqhuma Komshini Wokuqothula
Olandelayo: Ngomshini we-Type Shot Blasting
Izinga eliphakeme eliphakeme le-Shot Blasting Turbines
I-28Gallon Abrasive Blaster ene-Vacuum
Umshini wokuqhuma kwe-Shot, wadubula Umshini Wokupholisa, ukudubula ukuqhuma kwezingxenye ze-Spare, Shot Blasting Wheel, Shot Blasting Turbine, H umshini wokudubula uqhuma, Yonke Imikhiqizo